ईलिगललाई मलेसिया सरकारले मौका दियो, मलेसियामा वैधानिक रुपमा रहन दूतावासको आग्रह, ! - Onlines Time
ईलिगललाई मलेसिया सरकारले मौका दियो, मलेसियामा वैधानिक रुपमा रहन दूतावासको आग्रह, !
मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई गैर कानुनी अर्थात् ‘अनडकुमण्टेड’ भएर नबस्न आग्रह गरेको छ ।
मलेसियाको सरकारले त्यहाँ गैर कानुनी भएर रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई जरिवाना तिरेर आफ्नो कानुनी अवस्था सुधार्न मौका दिएको छ ।
अनडकुमेण्टेड हुँदा नेपाली श्रमिक जेल पर्ने गरेको पाइएको भन्दै समयमै मलेसिया सरकारले प्रदान गरेको अवसरको फाइदा उठाइ आफ्नो कानुनी अवस्था सुधार्न दूतावासले आग्रह गरेको हो ।
रिक्यालिब्रेशन कार्यक्रम अन्तर्गत मलेसियाले गैर कानुनी श्रमिकलाई दुई अवसर दिएको छ । पहिलो निश्चित शुल्क तिरेर स्वदेश फर्कन पाइन्छ भने दोस्रो चाहिँ पुनः मलेसियामा आफ्नो कागजात सच्याउँदै कानुनी रूपमा काम गर्न पाइन्छ ।
त्यसको लागि एक सय ६० मलेसियन रिंगिट राजस्व तिरेर दूतावासमा आइ ट्राभल डकुमेण्ट बनाउनुपर्छ । ट्राभल डकुमेण्ट दूतावासले दुई दिनमा उपलब्ध गराउँछ ।
त्यसपछि ट्राभल डकुमेण्ट, टिकेट र ७२ घण्टाको पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर केएलआईए काउण्टरबाट चेकआउट मेमो लिएर नेपाल फर्किन सकिन्छ । पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ भएको खण्डमा नेपाल फर्किन नपाइने पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ ।
यस्तै मलेसिया सरकारले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली पाँच देशलाई खुल्ला गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीको लागि अथवा नेपालबाट मलेसियामा श्रमिक लैजनाको लागि खुला नगरेको पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ ।
दूतावासले आफ्नो साप्ताहिक फेसबुक लाइभमा यस विषयमा प्रष्ट पारेको हो । भिसा पर्याप्त अवधिसम्मको लागि भएमा नेपाल जान सकिने र नेपालबाट पुनः मलेसिया जानुपर्ने भएमा मलेसियाको इमिग्रेशनबाट एप्रुभल लिनुपर्ने जनाएको छ । इमिग्रेशनबाट एप्रुभल लिएमा मात्र मलेसिया फर्किन पाइने र नलिएमा फर्किन नपाइने पनि दूतावासले जनाएको छ ।
Prevछोराको सर्टिफिकेट लिन गएका बुबाको अरिंगालले टोकेर मृ’त्यु
Nextबिनिता कुमालको भन्दा बि जोग परिवार भेटिएको,बुबालाई बचाइदिनुस् भन्दै छोरीको रु वा बा सी (भिडियो हेर्नुस्)